Ukukhula kwethebhulethi: Iinkcukacha-manani zokuSebenzisa kunye noLindelo | Martech Zone
NgeCawa, uJuni 29, 2014 Douglas Karr
Ndingumsebenzisi wethebhulethi onomdla… ndine-iPad kunye ne-Mini Mini ecaleni kweMacBook Pro kunye ne-iPhone. Into ebangela umdla kukuba, ndisebenzisa izixhobo nganye ngokuthe ngqo. I-Mini Mini yam, umzekelo, yicwecwe elifanelekileyo lokuzisa iintlanganiso kunye nohambo lweshishini apho kuhamba kakhulu kwaye andifuni ukurhuqa ilaptop yam kunye nazo zonke iintambo eziyimfuneko, iitshaja kunye nezinto zoncedo. I-iPad yam ihlala kufutshane nebhedi yam kumabonwakude yokuthenga kunye nokufunda. Kukhulu kakhulu kwishishini kodwa kuhle ekhaya.
Iitafile kunye neelaptops ziyitshabalalisile imarike yedesktop. Ngo-2013, i-PC desktop market yehla ngama-98%! Kutshanje ndiye ndaxhobisa kwakhona iofisi yasekhaya kwaye idesktop yathatha umhlala phantsi endaweni yokuma kwelaptop kunye Umboniso weThunderbolt. Kwaye imveliso yam ekhaya inyuke kakhulu kuba ndiphethe nje ilaptop yam phakathi kweeofisi kwaye akufuneki ndikhathazeke ngokufaka iitshaja, ukuhambisa iifayile, njl.
Ngo-2013 intengiso yeethebhulethi yaqhuma, yonyusa umyinge wama-68% ukuya kufikelela kwizigidi ezili-195.4 kwihlabathi liphela. Ngokuthengiswa kwehlabathi kulindeleke ukuba kufike kwiiyunithi ezi-1 zezigidigidi ngo-2017, kuye kwafuneka ukuba abaphathi kuwo onke amanqanaba baqonde ukubaluleka kwamacwecwe kunye nendlela abanempembelelo ngayo kumjikelo wokuthenga kunye nokuzibandakanya kwabathengi ngokubanzi.
Ukuqinisekisa ukuba indawo yakho iyaphendula ekusetyenzisweni kwethebhulethi- kunye nokusebenzisa ithuba eliphakathi lokukhangela isenzo okanye ukuphuculwa kweapp-inokubonelela ngophuculo olubonakalayo kubathengi bakho kunye nokuzibandakanya kwabatyeleli kunye noguquko. Inyani yile, abasebenzisi beethebhulethi banemisebenzi ethile, njengokufunda kunye nokuthenga, ukuba bayakuthanda ukusebenzisa iithebhulethi zabo ngaphezulu kwesiboniso sabo esiphathwayo, ilaptop okanye idesktop. Athini amava abafundi bakho?
tags: 2014zingaphi iipilisi ezithengisiweyoIwebhusayithi ephendulayoUkukhula kwethebhulethiimbonakalo yethebhulethiizibalo zethebhulethiukusetyenziswa kwamacwecwe eethebhulethiIzibalo zokusetyenziswa kwethebhulethiukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwethebhulethiisebenziseka
Juni 30, 2014 ngo-1: 50 PM
Ngaba ukho umntu ojonga ithebhulethi / ipc yeMicrosoft yamva nje. Ndizakufumana enye namhlanje kwaye ndizame ukucima zonke iimveliso zeApple. Molo Apple! Ndikwi-Macbook pro, iMac, ithebhulethi yamva nje kunye ne-iPhone. F-ukuba! Yithi molo ukuvula iteknoloji!
Juni 30, 2014 ngo-2: 00 PM
Ndingumntu othanda iApple kwaye andisibonanga isizathu sokushiya kude nabo uNancy.